Abantu-SiChuan XiangYue Power Line Components Co., Ltd.
Umyalezo ovela kwi-CEO
Ukuthembeka, imveliso kunye nokuyila yimiba ephambili yemeko yeshishini lehlabathi namhlanje.Injongo yenkampani yethu kukujolisa ukuhlangabezana nezi mfuno.
I-XY Tower Co., Ltd. yafunyanwa ngo-2008 xa yayiyinkampani yokuqala.Phantsi kobunkokeli bolawulo kunye nomzamo wabo bonke abasebenzi, i-XY Tower ngoku iphuhlise umenzi wenqaba oqeqeshiweyo kunye nenye yeenkampani ezinkulu zolu shishino entshona China.
I-XY Tower ibonelela "ngevenkile yokumisa enye" ​​yokurhweba ishishini lezixhobo zombane, uyilo lwenqaba kunye nokuveliswa kweenqaba.
ngenkxaso yolawulo olunamava kunye neenjineli zobuchwephesha, iXY Tower kukubonelela ngeemveliso ezikhuphisanayo kunye nenkonzo kubathengi bethu.I-XY Tower inazo zonke izinto;itekhnoloji, iinkqubo zolawulo, abantu kunye namandla emali ukuze babe ngumboneleli wenkonzo ohamba phambili e-China nakwamanye amazwe.
Sineqela elinobuchule nelithembekileyo.Sinamava ayayazi indlela yokuhlangabezana neemfuno zabathengi.Kwaye sinokuzithemba ukwenza isisombululo esihle kwaye siqinisekise ukuba izisombululo zethu zisebenza ngokupheleleyo, zisebenza ngokufanelekileyo kwaye zihlala zibhetyebhetye ngamaxesha onke.
Abaphathi bethu bane-avareji yeminyaka engama-30 yokusebenza kwamava kolu shishino kwaye bayawavuyela amathuba oshishino akhoyo kwimarike.
Kuyandivuyisa ukubona iinkqubo zolawulo ezikhula, abasebenzi abanomdla abanobubele kunye neqela lobuchwephesha ukuhlangabezana neemfuno zangoku nezexesha elizayo.Kungoku nje kubathengi bethu abaxabisekileyo ukuba bathathe isigqibo, ukuba i-XY Tower iphumelele kangakanani ukuhlangabezana okanye ukugqithisa ulindelo lwabo kwaye basivuze ngengxelo enyanisekileyo ukuze sibakhonze ngcono.
Ndiyathemba ngokunyanisekileyo ukuba kunye nabathengi bethu abatsha nabaqhelekileyo, masidale ikamva elingcono kunye!
Chunjian Shu (uSihlalo webhodi)
UMnu. Shu yinjineli yombane ephezulu kunye neminyaka engama-40 yamava kumashishini ombane.Wayeneminyaka engama-20 esebenza kwisebe lobutyebi bamanzi namandla ombane kurhulumente wephondo laseSichuan kwaye emva koko waqala walawula ishishini elinempumelelo kakhulu kushishino lombane kunye nonxibelelwano.
UMnu. Shu unomsebenzi onempumelelo kakhulu kwicandelo likarhulumente kunye nokulawula uphuhliso loshishino.Ububonakalisile ubunkokeli bakhe kwaye unengqondo entsha ngaphakathi kuye.
UMnu. Shu ube negalelo ekuphuhliseni abantu abakhutheleyo nabanobuchule
iqela lobuchwephesha.Uyinkokeli yeshishini esebenzayo kwaye uphumeze iimbono ezininzi ezintsha ekwakheni ukuseta umbane.UMnu. Shu unethemba elicacileyo kwaye ukholelwa ekusebenzeni nzima.Uzinikele ekudaleni ixabiso kumnini sabelo nakuluntu.
UYong Lee (uMphathi Jikelele)
UMnu lee, othweswe isidanga kunyango lomphezulu wesinyithi kwiYunivesithi yaseHebei yeSayensi neTekhnoloji.
UMnu. Lee waqala umsebenzi wakhe kwiBureau of Geological Prospecting kumazantsi-ntshona eTshayina ngo-1980.Emva koko waye wasebenzela umenzi wenqaba karhulumente owayenabasebenzi abangama-700 iminyaka engama-20.
UMnu. Lee unamava atyebe kakhulu okusebenza nemibutho eyahlukeneyo equka icandelo likarhulumente, ishishini likarhulumente kunye nenkampani yabucala.Unerekhodi eqinisekisiweyo yokulawula ngempumelelo ifemu enkulu yemveliso.
Njengenkokeli, ukukwazi kwakhe ukuququzelela iqela elinomdla elihlangeneyo elihambelana nombono wakhe lenza ukuba inkampani iphumelele isikhundla esincomekayo elizweni.
UMnu. Lee yingcaphephe kwishishini leentyantyambo elishushu elinodumo kumzantsi-ntshona weTshayina.Unobuchule bokujongana nonyango olukhethekileyo lomphezulu wenqaba kwindawo enomhlwa ophezulu.
Willard Yue Shu (UMlawuli weshishini laphesheya)
UMnu. Shu wafumana isidanga sakhe solawulo ngezimali zamazwe ngamazwe kwiYunivesithi yaseGlasgow, eBritani.Uneminyaka elishumi yamava okusebenza anenkqubela phambili kwi-venture Capital Institution.Ulawula imicimbi yeMali yenkampani, iMicimbi yaBasebenzi kunye noShishino lwaphesheya.Unehlombe kakhulu kwinkqubela phambili yenkampani kunye nezinto ezintsha zobugcisa.
Uziqonda kakuhle iindlela zolawulo lwale mihla kwaye unezandla ezityebileyo kumava kwiinkalo zoqikelelo lweendleko, ucwangciso lweprojekthi, kunye notyalo-mali lwe-hi-tech.Unesakhono esigqwesileyo sokukhokela iqela kwaye anikezele ngenkonzo engaphaya kolindelo lwabathengi.
Ukwakhokele iinzame zokuseka ishishini laphesheya kwenkampani.Ubunkokeli bakhe obuguquguqukayo kunye nembono ebanzi yehlabathi iya kukhokelela inkampani ekwandiseni i-horizons yayo ngaphaya kwemida yasekhaya.
Unjineli weprojekthi oyiNtloko, kunye neminyaka engama-20 yamava omsebenzi weenqaba zentsimbi, ingcali eyaziwayo ngokukodwa kwintsimi ye-angel steel transmission tower.Iqela leenjineli liquka abantu abayi-6, ngamnye uneminyaka eyi-5-20 yamava omsebenzi.Ezinye iinjineli zilungile kwiinqaba zothumelo kwaye ezinye zilungile kwiinqaba zonxibelelwano.Zonke iinjineli ziya kuzama ukufumana isisombululo esipheleleyo kwiprojekthi nganye ngamava abo amnandi.
Umphathi wemveliso, oneminyaka eyi-16 yamava okuvelisa inqaba, ojongene nolawulo lwemveliso yenqaba ukusuka kwizinto eziluhlaza ukuya kwiimveliso ezigqityiweyo.Kukho abantu be-115 kwiqela lemveliso kunye neetoni ze-30,000 zezinto zensimbi ziya kuveliswa ngonyaka.
Umphathi wediphu otshisayo, othe wasebenza kushishino lokugalela amazimba iminyaka engama-25, ubukhulu becala unoxanduva lokugalela iintlobo zezixhobo zentsimbi, ekhokela iqela labantu abangama-30, abanamava atyebileyo okuqinisekisa umgangatho weHDG.
Injineli eyintloko yemizobo yokuphakamisa, kunye neminyaka eyi-11 yamava omsebenzi wokunyusa.Iqela lonke lingabantu aba-5, umntu ngamnye uchitha iintsuku ezi-3 ukuya kwezi-5 ukugqiba ukuphakamisa umzobo wohlobo olu-1 lwenqaba.
Umhloli wezinto eziphathekayo, kukho abantu aba-5 kwiqela lokuhlola izinto eziphathekayo, wonke umntu unesatifikethi "sesiqinisekiso sesiqinisekiso sabasebenzi bovavanyo lwemathiriyeli", baya kuqinisekisa ukuba izinga lokupasa kwemveliso likhulu okanye lilingana ne-99.6%, kunye nokupasa kwefektri. ireyithi yi-100%.
Umthengisi we-Rep, uShirley Song unobuhlobo kakhulu, umonde, kwaye uthengisa ngobuchule, osebenze e-XY Towers iminyaka engaphezu kwe-10 kwaye uyazi kakuhle inqaba yensimbi.
I-Rep Rep, intombazana exabisa umthengi kakhulu kwaye inebhongo ngokunzulu ngaye njengentengiso, inomdla kakhulu kwiinqaba zentsimbi, inethemba lokubonelela ngesisombululo esona sihle kumthengi ngamnye.
Zhonghai He INtloko yeSebe loLungiselelo
Uye waba noxanduva lolungiselelo ekhaya nakwamanye amazwe iminyaka 12 XY Tower.Ngubani oqhelene kakhulu nokuhanjiswa kunye nokuthunyelwa kwezikhongozeli & nezibuko ezihambelana neentlobo zethu zeemveliso.